Guddoomiyaha degmada Dhadhaab oo la dagaalamaya mootooyinka - Sabahionline.com
Guddoomiyaha degmada Dhadhaab oo la dagaalamaya mootooyinka
Guddoomiyaha degmada Dhadhaab Albert Kimathi ayaa ku dhaartay in uu la dagaallami doono mootooyinka loo yaqaan boda bodaha ee sida tagaasida uga shaqeeya xeryaha qaxootiga Dhadhaab, sidaana waxa Khamiistii (2-dii August) sheegay The Star-ka Kenya.
Mas'uuliyiinta Soomaaliya iyo Kenya oo diiday in ay al-Shabaab kala wada-xaajoodaan la haystayaasha
Kenya oo xustay sannad-guuradii 1-aad ee howl-galkeeda Soomaaliya
Al-Shabab oo abaal-gud dul-dhigtay madaxa ciidamada ammaanka
Wadayaasha mootooyinka ayaa lagu eedeeyay in ay bilihii dhawaa ay dadka dambiilayaasha ah u kala daabulayeen gudaha iyo bannaanka xerada. Hadda iyo wixii ka dambeeya mootooyinka looma ogolaan doono in ay shaqeeyaan wixii ka dambeeya 6-da maqribnimo.
"Si ka duwan sidii hore markii aan hayanay tagaasida kaliya, ayay bilihii la soo dhaafay mootooyinku soo bexeen oo ay noqdeen nooc gaadiid oo ay in badan dadku door-bidaan," ayuu yiri Kimathi. "Tani waxa ay nagu sababtay argaggax, waayo wadayaashu waa la yaqaan oo intooda badan maaha kuwo diiwaan-gashan. Waxannu hadda ka shakisanahay in ay dhagar-qabayaashu u isticmaalaan sidii ay ku fulin lahaayeen jariimadooda."
Laba mooto ayaa dajiayay dagaalyahaniintii al-Shabaab ee looga shakiyay in ay afduubeen shaqaalihii gargaarka ee Golaha Qaxootiga Norway (NRC) ee la afduuay bishii hore kuwaa oo laga qafaashay xerada qaxootiga Ifo II looga kaxaystay Soomaaliya, sida uu sheegay wargaysku.